Suuqa Kala Iibsiga: Kooxda Uu Daneynayo Inuu Ku Biiro Lewandowski Oo Lasoo Ogaaday, Waa Kooxdee? – STAR FM SOMALIA
Sida ay qoreen warbixino ka imaanaya Spain ciyaariyahanka weerarka uga ciyaara kooxda Bayern Munich Roberto Lewandowski ayaa daneynaya inuu ku biiro kooxda Paris Saint Germain.
Fichajes.net ayaa qortay in xidigaan uusan ku faraxsaneen nolosha garoonka Allianz Arena isla markaana uud daneynayo inuu horyaalka Faransiiska u dhaqaaqo.
Weeraryahankaan reer Poland ayaa haatan kusoo laab kacay inuu shaqada ka tagi doono Guardiola iyadoo xagaaga dambe uu imaan doono Ancelotti, sidoo kalana wuxuu ka carooday in kooxdiisa ay xiiseyneyso Gonzalo Higuain.
Lewandowski ayaa iska iloobaya Real Madrid madama Karim Benzema uu waqti wacan ku heysto halkaas, wuxuuna markaan naftiisa u sheegayaa in horyaalka Faransiiska uu yahay kan ugu haboon waqtigaan.
Dhanka kale Paris Saint Germain ayaaba u aragta sheeko xasaasi ah arinkaan madama aan la hubin mustaqbalka Ibrahimovic iyo Cavani ee xagaaga dambe weyna kusoo dhaweynayaan magaalada Paris.